Nelsan Maandeelaan Du’an Boqotan
Muddee 06, 2013
WASHINGTON, DC — Prezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Nelson Maandeellaa umrii isaanii 95tti kamiisa kaleessaa du’an boqotanii jiran.Uummanni addunyaa irra jiru prezidaantii gurraacha Afrikaa kibbaaf isa jalqabaa ta’an kanaaf gadda itti dhaga’ame ibsaa jira.
Mootummaan Afrikaa kibbaa bara 1960 paartii ANC kan uggure ta’uus garuu dhoksaan sosso’uu itti fufan.
Maandeelaan yeroo baayyee polisoota harkaa miliqaa turan.kanaafiis haadha warraa isaanii ishee lammataa Winne irraa adda ba’anii jiraachuuf dirqaman.
Bara 1962 Maandeelaan hidhamanii mootummaa irratti shiran jedhamanuu yakka ilaalchatti dhiyaatan.Tarkaanfiin fudhadhe hogganaa uummanni Afrikaa hawaasa bilisoome akka qabaatuuf qabsaa’uu kooti jechuun falman.
Waggaa lama booda adabii hidhaa umrii guutuu irratti muramee handara galaana keeptaawoon kan jiru mana hidhaa odoola Roobiin keessatti hidhaman.Mana hidhaa hamaa kana keessatti waggootii 18 eega hidhamanii booda/ bara 1989 qabsoo hidhannoo ANC gaggeessu balaaleffadhu hidhaa ba’ii jechuun waamiicha mootummaan dhiyeesse didan.
Garu waggaa tokko booda bara 1990 prezidaantiin yeroo sanaa Freedriik de clerk paartileen siyaasaa kam iyyu seeraan kan deggeraman ta’u eega labsanii hidhamtoota siyaasaa harka caalaa waan hikaniif maandellaanis hiikaman.
Bara 1991 maadellaan prezidaantii ANC ta’uun filataman.